RakhineTharGree – Page3– Arakan eLibrary
Welcome to RakhineTharGree
Ready to quest for knowledge?
Posted on July 12, 2016 July 12, 2016 RakhineThar GreeLeaveacommentPosted in Books, Poetry
စာအုပ်နာမေ။ ။ ရွက်နုပြန်ချိန် အကြောင်းအရာ။ ။ မော်ဒန်ရခိုင်ကဗျာတိသီးသန့် စုစည်းထားမှု စီစိုင်သူ။ ။ ရခိုင်လှမြင့်
ငါရို့ ဇာလုပ်ကတ်ဖို့ လဲ-၃
Posted on June 20, 2016 July 12, 2016 RakhineThar Gree1 CommentPosted in Books, Politics
စာအုပ်နာမေ။ ငါရို့ ဇာလုပ်ကတ်ဖို့ လဲ-၃ စီစိုင်သူ။ ရခိုင်လှမြင့် စာရီးဆရာ။ ပေါင်းချူပ် စာမြည်း။ လက်ဟိကာလ ရခိုင့်နိုင်ငံရီး၊ တော်လှန်ရီး၊ လူမှုရီး၊ ယိုင်ကျေးမှုစရေ ဆောင်းပါးကောင်း အမြင်အယူအဆကောင်းတိကို စုစည်းတင်ပြထားခြင်း ဖတ်ကြည့်ချင်ကေ အောက်ကလင့်ခ်ကို နှိပ်ပနာ ဒေါင်းလုပ်ခ် လုပ်နိုင်ပါရေ။
ငါရို့ ဇာလုပ်ကတ်ဖို့ လဲ – ၂
Posted on June 19, 2016 July 12, 2016 RakhineThar GreeLeaveacommentPosted in Books, Politics
စာအုပ်နာမေ။ ငါရို့ ဇာလုပ်ကတ်ဖို့ လဲ-၂ စာရီးဆရာ။ စာရီးဆရာပေါင်းချူပ် စာမြည်း။ လက်ဟိကာလ ရခိုင့်နိုင်ငံရီးနန့် ပတ်သက်တေ ဆောင်းပါးတိစုစည်းထားခြင်း ဖတ်ကြည့်ချင်ကေ အောက်ကလင်ခ့်ကို နှိပ်ပနာ ဒေါင်းလောခ့်လုပ်နိုင်ပါရေ။
ငါရို့ ဇာလုပ်ကတ်ဖို့ လဲ
စာအုပ်နာမေ။ ငါရို့ ဇာလုပ်ကတ်ဖို့ လဲ စာရီးဆရာ။ စံကျော်ထွန်း (မဟာဝိဇ္ဇာ) စာမြည်း။ ဗမာကျူးကျော်သူနယ်ချဲ့ ကို ဆန့် ကျင်တော်လှန်ရေ ရခိုင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရီးလှုပ်ယှားမှုကို ဇာပိုင်လုပ်လားသင့်လဲဆိုစွာကို တင်ပြဆွေးနွေးထားရေ နိုင်ငံရီးစာတမ်း ဖတ်ကြည့်ချင်ကေ အောက်ကလင့်ခ်ကို နှိပ်ပနာ ဒေါင်းလော့ခ်လုပ်လိုက်ပါ။
Posted on June 19, 2016 July 12, 2016 RakhineThar GreeLeaveacommentPosted in Books, Literature, Politics
စာအုပ်နာမေ။ ရခိုင်ကဗျာနန့် ရခိုင်အတွေးအခေါ် စာရီးဆရာ။ ဆရာစံကျော်ထွန်း စာမြည်း။ ရခိုင့်စာပီအဆီအနှစ်တိဖြစ်တေ ကဗျာအမျိုးအစားတိကို ရှင်းပြထားပနာ ရက္ခိုင့်မဏ္ဍိုင် ရခိုင်အတွေးအခေါ်တိကို ဖော်ပြထားပါရေ။ ရခိုင်စာပီလေ့လာသူရို့ နန့် နိုင်ငံရီးတော်လှန်ရီးသမားရို့ ဖတ်သင့်ရေ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါ။ ဖတ်ကြည့်ချင်ကေ အောက်ကလင့်ခ်ကို နှိပ်ပနာ Download လုပ်နိုင်ပါရေ။
Posted on June 15, 2016 June 15, 2016 RakhineThar GreePosted in Books, English
Twilight Over Burma: My Life asaShan Princess by Inge Sargent Just married and arriving by ship in Rangoon in 1953 to begin life in her husband’s native land,ayoung Austrian woman stood ready to disembark with her Burmese husband. On the dock she could see hundreds of well-wishers displaying banners, playing homemade […]
နိုင်ငံရီးနန့် ပတ်သက်တေ စာအုပ်တိ
Posted on June 14, 2016 RakhineThar GreeLeaveacommentPosted in Books, Politics
နိုင်ငံရီးနန့် ပတ်သက်တေ စာအုပ်တိကို ဒေနီရာမှာ တင်ပီးလားပါဖို့ ။
Posted on June 14, 2016 June 14, 2016 RakhineThar Gree2 CommentsPosted in Papers
ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာ စာတမ်းတိကို အေနီရာမှာ တင်ပီးလားပါဖို့ ။
Posted on June 13, 2016 June 13, 2016 RakhineThar GreeLeaveacommentPosted in Uncategorized
Welcome to RakhineTharGree! This website is under construction. Thank you for your patience. We hope to see again!